Yey u adeegsatay haweeneyda sumeysay Macalin Cumar? - Axadle Wararka Maanta
Yey u adeegsatay haweeneyda sumeysay Macalin Cumar?
By Abdiwahab Ahmed	 On Jul 15, 2021
Beledweyne (Axadle) – Taliska Booliska Beledweyne ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyey falkii xalay lagu sumeeyey Allaha u naxariistee marxuum Cumar Macalin Maxamud oo ahaa Macalin dhiga dugsi lagu barto Qur’aanka Kariimka.
Taliyaha saldhigga Booliska magaalada Beledweyne, Laba Xidigle Maxamed Maxamuud Rooble Qorsheel oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dhacdadan ay ka dambeysay xaaska marxuumka, isla-markaana ay socdaan baaritaano dheeraad ah.
Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay qaadeen howl-gal, kadib falkaasi waxaana uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen wiilal yar yar oo uu sheegay in haweeneyda ay u adeegsatay dhacdada sumeynta ee lagu dilay Macalin Cumar.
Qorsheel ayaa sidoo kale xusay in cadaaladsa la horkeeni cid kasta oo ka dambeysay dilka marxuumka, isla-markaana ay natiijada baarista dib ka shaacin doonaan.
Hogaamiyaha Hirshabelle iyo wafdi ka socday QM oo kulan ku yeeshay…
Ugu dambeyn waxa uu digniin adag u diray ganacsatada, isaga oo sheegay in aan la iibin karin sunta dadka disha, iyada oo aan fasax looga heysan laamaha amniga.
Sida ay Axadle u sheegeen xubno ka tirsan ehellada marxuumka ayaa dhowaan guursaday haweeneyda Sumeysay, lamana oga sababta ku kaliftay.
Dhacdadan ayey aad uga argagaxeen dadka ku nool Xaawo-taako ee Beledweyne, maadaama uu ahaa Macalin Dugsi Qur’aan oo aad looga yaqaanay xaafaddaasi.
Allaha u naxariistee Macalin Cumar Macalin Maxamud ayaa maanta lagu aasay gudaha magaaladaasi, waxaana aaskiisa ka qeyb-galay mas’uuliyiin & dadweyne fara badan.
Abdiwahab Ahmed 3135 posts
One Main Facet Impact of Consuming Yogurt, Says Dietitian